Imizi yaseVenda isihlukene njengoba ibhuloho elineminyaka engama-80 ubudala liwile futhi | Scrolla Izindaba
Imizi yaseVenda isihlukene njengoba ibhuloho elineminyaka engama-80 ubudala liwile futhi
Ibhuloho elisezingeni eliphansi e-Limpopo, elakhiwa ngowe-1940, belingenakulinganiswa nezikhukhula ezilethwe iSiphepho u-Eloise.
IBhuloho lase-Luvuvhu – elingakathuthukiswa selokhu lakhiwa – kulindeleke ukuthi lixhumanise amadolobhana ase-Mashawana, e-Dzwerani nase-Hasani Dakari, ngaphandle kwase-Thohoyandou, e-Limpopo.
Njengamanje abahlali bathukuthele njengoba bethi bavame ukuhlukana njalo ngemuva kweziphepho – njengamanje nje.
Izikhukhula zangempelasonto ezidalwe yiNkanyamba u-Eloise zishiye isigodi sase-Hasani singenakuzisiza – kungathi isiqhingi sisodwa nje.
Abahlali bathi leli bhuloho lingaphansi kwamanzi futhi abakwazi ukungena edolobheni lase-Thohoyandou, badlula esigodini sase-Mashawana, ukuyothenga ukudla okuyisisekelo.
Uma kunezimo eziphuthumayo, amalungu omphakathi kufanele asebenzise umgwaqo okude wase-Vuwani noma e-Malamulele ukuthola isibhedlela esiseduze sase-Tshilidzini. Ngesikhathi ibhuloho lisasebenza, bekungukuphonsa itshe ukusuka ezigodini.
Umholi womphakathi uEdward Chauke ucele iziphathimandla ukuthi zingenelele, wathi le ndawo idinga ibhuloho elisha ukuvikela umnotho wendawo.
“Iphutha elikhulu elenziwe nguhulumeni wethu okhethwe ngentando yeningi ukungasinaki futhi akhohlwe yisimo sethu thina miphakathi yasemakhaya.”
Leli bhuloho bekufanele ngabe selithuthukisiwe laba yibhuloho eligcwele ngokuphelele kudala kodwa namanje alifani selokhu lakhiwa, uyacabanga.
“Kumele sichithe imali eningi kwezokuthutha siya e-Thohoyandou sidlula e-Vuwani noma e-Malamulele ngebanga elingathatha imizuzu eyi-15 kuphela uma ibhuloho lisebenza ngokuphelele,” kusho uEdward.
Kuke kwaba namahlebezi okuthi umasipala wendawo uzokwenza ngcono, “kodwa kubukeka sengathi lokho kwamiswa futhi isizathu asikasazi,” esengeza.
Ngesikhathi kucelwa ukuthi kuphawulwe, umasipala wesifunda nomasipala wendawo badlulisele inkunzi komunye nomunye.
Okhulumela umasipala wesifunda i-Vhembe, uMatodzi Ralushai, uthe udaba lwamabhuloho ezigodini akusewona umsebenzi wabo, umsebenzi womasipala bendawo obhekana nalokhu.
Okhulumela umasipala wase-Thulamela uNdwamato Tshiila udlulisele impunzi kumasipala wesifunda ethi yibona ababhekela umgwaqo.